2018 – Year – Yourcinema
If Beale Street Could Talk ဒီကားလေးက လူမဲရက်ကွက်ထဲက ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေး ချစ်သူလူငယ်လေးနှစ်ယောက်အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာပါ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက သိခဲ့ကြတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်က ချစ်ခဲ့ကြတော့လည်း ငယ်ရွယ်သူတို့ထုံးစံအတိုင်း တိမ်ငွေ့လွင်လွင် ချစ်ခြင်းတရားတွေနဲ့ပေါ့ အနာဂတ်ဘ၀တွေကို တူတူအိမ်မက်မက်ကြရင်း ကောင်လေးက သူမကျူးလွန်ထားတဲ့ အမူတစ်ခုမှာစွဲစွပ်ခံရတဲ့အခါမှာတော့ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကို ခံစားကြည့်ရူရမှာပါ Rating 7.1တောင်ရထားတာမို့ကြည့်သင့်တဲ့ကားကောင်းလေးပါဘဲ အသားရောင်ခွဲခြားမူကတော့ အရင်ကတည်းကနေလက်ရှိအထိ ရှိနေဆဲပါဘဲ တရားကိုတစ်ကယ်ရော နတ်စောင့်ပါရဲ့လား...ဥပဒေဆိုတာကရော အားနဲတဲ့သူတွေအပေါ် သက်ရောက်မူရှိရဲ့လားဆိုတာကိုတော့ တွေးတော့ဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Translated & Review By Yamin Ou Encoded By Kar Yan
IMDB: 7.1/10 37,848 votes
K.G.F: Chapter 1 ဒီဇာတ်ကားဟာ မကြာသေးမီက 2018နှစ်ကုန်ပိုင်း ဘောလိဝုဒ်နာမည်ကြီးဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ ရုရွတ်ခန်းရဲ့ Zero နဲ့အတူရုံတင်ပြီး အောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ခန်နားဒါးပြည်နယ်က မင်းသား Yash ရဲ့အရင်ထွက်ပြီးတဲ့ ဖန်စီအချစ်ကားတွေနဲ့ မတူ တမူထူးခြားနေတော့ အားပေးမှုတော်တော်လေးရခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်ကားလေးမှာတော့.... ==================== KGF ဆိုသော ရွှေတွင်းကြီးအကြောင်းကို ဒီအပိုင်း ၁ မှာ တင်ဆက်ပြီးတော့ ဇာတ်အိမ်တည်ထားတဲ့ဇာတ်ကားပါ.. ကေဂျီအက်ဖ် ဆိုသော ရွှေတွင်းကြီးစတင် ဖြစ်ပေါ်လာချိန်မှာ ရွှေတွင်းအားလောဘတတ်ပြီး အဲဒီရွှေကြောကြီးတစ်ခုလုံးကို လက်နက်ကိုင်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်... အဲဒီရွှေတွင်းကြီး စတင်ဖြစ်ပေါ်လာချိန်မှာပဲ တစ်ချိန်တည်း ရောကီ မွေးဖွားခဲ့တာ ကံတရားကြီးတစ်ခုလား ဆိုတာကတော့ .... ရော့ကီ ဟာ ငယ်စဉ်ကအရမ်းဆင်းဆင်းရဲရဲနေထိုင်ခဲ့ရသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ့အမေဟာ လည်း ဆေးဖိုးဝါးခ မတတ်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဆုံးပါးသွားခဲ့တာပါ... သူ့ရဲ့အမေ မဆုံးခင်မှာကြားခဲ့တာကတော့ ရော့ကီကို အောင်မြင်အောင်နေ သူဌေးဖြစ်အောင်နေ လူတွေအပေါ်လွမ်းမိုးနိုင်အောင်နေ ဆိုပြီး မှာကြားခဲ့ပါတယ်... အဲဒီနောက်ပိုင်း ရော့ကီ ဟာ ဘွန်ဘေက ဂိုဏ်းတစ်ခုတွင်အားကိုးရသူ နာမည်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ....... ကေဂျီအက်ဖ် ရွှေတွင်းနဲ့ ရော့ကီနဲ့ ကံတရားနှစ်ခု ဘယ်လိုဆက်စပ်သွားမလဲ..... ရော့ကီ ရဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းစဉ်ဟာ ကေဂျီအက်ဖ်ရွှေတွင်းနဲ့ စတင်မလား... ဘယ်လိုမျိုး ...
IMDB: 8.2/10 30,045 votes
Door Lock "It's OK, that's love" drama မှာခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီး Kong Hyo Jin ကိုတော့ K drama fan တွေရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ သူ့ရဲ့ နာမည်ရရုပ်ရှင်ကားတွေထဲက တကားအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ Door lock (2018) နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။Brussel International Festival of Fantasy Film (BIFFF)(2019) မှာ Best Thriller Award ကို ရရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ 2018 တုန်းက ထွက်ခဲ့ ဒီဇာတ်ကားကို တချို့ကြည့်ပြီးသားလည်း ဖြစ်ကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီကားဟာ နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ပထမတစ်ခေါက်တုန်းကနဲ့ မတူတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ရသကို ပေးပါတယ်။ ပထမတစ်ခေါက်ကြည့်တုန်းက မမြင်ခဲ့တဲ့ တချို့ဝှက်ဖဲတွေကို နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ခါမှ သေချာပြန်တွေ့ရပြီး မတူတဲ့ရင်ခုန်မှုမျိုးရစေတဲ့ ဇာတ်ကားပါပဲ။ မကြည့်ရသေးတဲ့ သူတွေအတွက်လည်း spoiler ရှောင်ပြီး ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း‌ကို ...
Bharat Ane Nenu Unicode Version ဖခင်ကြီး ကျန်းမာရေးချို့တဲ့နေပြီဆိုတဲ့သတင်းကြောင့် နိုင်ငံခြားမှာ ပညာတော်သင်သွားနေတဲ့လူတစ်ယောက် ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်မြေကို ပြန်လာတယ် ပြန်ရောက်တော့ဖခင်ကြီးရဲ့အသက်ကိုမမှီလိုက်သလိုဇပနအခမ်းအနားကိုတောင် ကျင်းပခွင့် မရလိုက်ဘူး. . . သို့ပေမယ့် ကောက်ကာငင်ကာဆိုသလို ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးကို ဝင်ရောက်ထမ်းဆောင်ဖို့ ဖြစ်လာတယ် ပညာတတ် လူငယ်လေးဖြစ်တဲ့အပြင်ဖခင်ရဲ့ သွေးအပြည့်ပါတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်အလုပ်ကို ကြိုးစားတယ် မှန်ကန်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်တယ်တည်ကြည်တယ် ဖြောင့်မတ်တယ်ရဲ့ဝံ့တယ်. . . ဘယ်သူ့မျက်နှာကိုမှ မထောက်ဘူး ပြည်သူတွေကို ချစ်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်အောက်ခြေလူတန်းစားတွေနေတဲ့ ကျေးလက်ဒေသတွေအထိ ရှောင်တခင် စစ်ဆေးတတ်တယ် သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေက တာဝန်ကျ အစိုးရ အရာရှိတွေကို ပြည်သူ့အကျိုး သယ်ပိုးသူမှန်ရင် မြှောက်စားတယ် လာဘ်စားပြီး တာဝန်မကျေရင် ဖြုတ်ပစ်တယ်. . . အဲ့ဒီလောက်အထိ ရဲရဲတောက်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာတယ်. . . လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု ကောင်းမွန်ရေးလမ်းတံတားပြုပြင်ရေးကျေးလက်ဒေသ စည်ပင်ဖွံဖြိုးရေးစတဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကို မျှတအောင် သုံးစွဲပြီး ရန်ပုံငွေတွေ ချပေးကာကိုယ်ထူကိုယ်ထ လုပ်စေတယ် သူက ပြည်သူကို ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးစေချင်တဲ့ ဒီလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ပိုင်ရှင် ဝန်ကြီးချုပ်ပါ။ သူပြောတဲ့စကားက”စစ်မှန်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာခေါင်းဆောင်မလိုတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ဖြစ်တည်လာအောင် လမ်းပြပေးတဲ့သူပါ”တဲ့ မည်သို့ပင်ဆိုစေ. . .ပြည်သူ့အချစ်တော် ...
IMDB: 7.7/10 14726 votes
Kaali အမေရိကန်မှာအောင်မြင်နေသောခွဲစိတ်ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဘတ် အနေနဲ့ သူဟာ အိပ်မက်တစ်ခုကိုထူးထူးခြားခြားမက်လျက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီအိပ်မက်ဟာ ကျွဲကြီးတစ်ကောင်ဟာကလေးတစ်ယောက်ရဲ့နောက်ကို လိုက်နေတဲ့အိပ်မက်တစ်ခုပါ... ဘတ်ရဲ့အမေဖြစ်သူအရေးပေါ်ကျောက်ကပ်အစားထိုးကုသရန်လိုအပ်လာချိန်မှာ ဘတ်နဲ့သွေးအမျိုးအစားမတူခြင်းကြောင့် ဘတ်က သားအရင်းမဟုတ်မှန်းကိုသိလိုက်ရပါတယ်.. အဲဒီနောက်မှာသူက အိန္ဒိယကိုပြန်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့အမေအရင်းကိုပြန်ရှာတဲ့အချိန်မှာ...... Translated By Kyaw Gyi Encoded By Nanda Kyaw
IMDB: 5/10 254 votes
How Long Will I Love U Review ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့၁၉၉၉နဲ့၂၀၁၈ ကိုအပ်ြိုင်ရိုက်ထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးပေါ့နော် ငယ်စဉ်က မိသားစုနဲ့ နေထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်ကို ဝယ်ပေးနိုင်မဲ့ သတို့သားရှာနေတဲ့ ရှောင်ကျို နဲ့ သူရဲ့ အနာဂတ်သူတို့သားလောင်း ဖြစ်လာမဲ့ လျူမင်တို့ ရုတ်တရက်တွေ့ကြတဲ့အခါ Time-zone မတူတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ကြားပေါက်ဖွားလာမဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး... အတိတ်ကကိစ္စတွေကို သူတို့နှစ်ယောက်ပြောင်းလဲနိုင်ပါ့မလား? သူတို့ကရော အဆုံးသတ်မှာတူတူရှိနိုင်မှာလား ဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါနော် Translated & Review By Wutt Yee Encoded By Kar Yan
Sketch 2018 ဒီကားက လောလောလတ်လတ် Saamy II ဆိုတဲ့ ရဲကားထွက်ထားတဲ့ မင်းသားကြီး ဗစ်ကရမ်ရဲ့ပညာပေးကားပါ။ ပညာရေးရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ဘယ်လောက်အရေးပါသလဲ။ လူငယ်တစ်ယောက် လမ်းမှားရောက်တဲ့အခါ ဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်လာသလဲဆိုတာကို ပညာပေးထားတဲ့ကားပါ။ အက်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဆိုလဲမမွားပါဘူးဗ် အကြမ်းကြိုက်သူတွေ လာကြည့်ပါဗျ..... အကြမ်းမကြိုက်သူတွေလည်း ကြည့်နိူင်ပါသည်....
IMDB: 5.7/10 1551 votes